Cereals | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ịgha mkpụrụ na Atụmatụ Nlekọta maka Millet
Naanị onye ọ bụla maara ihe millet bụ. Millet bụ mkpụrụ osisi kwa afọ nke ezinụlọ ọka. Omenala nwere ihe dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-esi na mgbọrọgwụ apụta. Ihe omuma bu paniculata, okpukpu abua nwere uzo abuo - bisexual na asexual. Ntị nke osisi dị n'akụkụ nke ọzọ, na-adabere na nke ọzọ.
Atụmatụ maka ịgha mkpụrụ na ọka wit sorghum
Mkpụrụ sorghum bụ otu n'ime mkpụrụ ọka ndị kacha ochie, nri nri na ihe oriri, bụ nke a maara n'ozuzu ya dịka nri nri anụ ụlọ. Otú ọ dị, n'oge na-adịbeghị anya, ahịhịa a aghọwo ihe a ma ama n'etiti ndị na-akwado nri na nri na-edozi ahụ, ndị na-atụ aro na a ga-etinye sorghum na nri ndị na-ele ibu arọ ha.
Iji rye dị ka akụkụ n'akụkụ
Na-arịwanye elu, na saịtị anyị rye na-edozi dịka akụkụ. Akuku akuku nke oma bu ihe di nma na-achikota ala na uzo ozo. Ọdịiche dị iche iche nwere ike ime ka ndị mmadụ na-eme ihe, ma rye bụ ihe kachasị ewu ewu. Rye dị ka siderat: atụmatụ Rye bụ mkpuru akwụkwọ kwa afọ nke ezinụlọ ọka.
Nzuzo nke na-eto eto site na osisi
Nkwado bụ mkpụrụ nke osisi herbaceous nke ezinụlọ ọka. O rute elu nke 1.2 ruo 2 mita Ovsyanitsya bụ ma eleghị anya osisi ahịhịa na-ewu ewu na hotikoisho na odida obodo. Ịhọrọ ebe maka fescue. Ebe dị ọkụ, na akọrọ na anwụ na-acha, ga-adabara oriri ahụ. Nke a nwere ike ịmalite ìhè site n'akụkụ ndịda nke rockeries ma ọ bụ ubi ndị dị egwu, ebe ọ bụ na ọbụna okpomọkụ kachasị elu anaghị adị ize ndụ maka osisi ahụ.
Isiokwu ahọrọ ihe eji eme ka ị mara gị na mkpụrụ osisi ọka pụrụ iche, na-enwe aha dị mma ma dị iche - "triticale." Kedu ụdị osisi ọ bụ, ihe mere triticale na-akụ na ihe nkà na ụzụ nke nsị, gụọ n'okpuru ebe a. Triticale - ihe o bu Triticale - bu ihe aka mmadu.
Kedu ihe ọka bara uru
Kemgbe anyị bụ nwata, anyị na-anụ banyere nri kwesịrị ekwesị na ahụ ike, ihe kachasị mkpa nke kwesịrị ịbụ porridge dị ka isi iyi nke ndị dị ezigbo mkpa carbohydrates Otu n'ime ihe ndị bara uru ma dị mma bụ ọka barley porridge .. N'isiokwu ahụ, anyị ga-ekwu maka ihe ọka bali dị mma maka ahụ, na ihe ọ ga-ebu merụrụ ya ahụ
Ụdị ọka kachasị mma maka ịme popcorn
Mgbe mgbe, anyị na-aga cinema ma ọ bụ ebe ntụrụndụ, anyị na-azụta otu ịwụ nke popcorn. Ya mere na-atọ ụtọ, na ihe nkiri (ma ọ bụ ngosi) yiri ihe na-adọrọ adọrọ. Ihe a na-enye obi ụtọ, nke nwere calorie ole na ole, nwere ike sie ya n'ụlọ. Ihe kachasị mma Onye ọ bụla maara ihe popcorn mere. Site na ọka. Mana ọ bụghị mmadụ niile maara na ọ bụghị ụdị niile dị mma maka nkwadebe ya.
Cereals - ụdị isi
Mkpụrụ bụ mkpụrụ osisi nke otu mkpụrụ akụkụ ahụ, nke gụnyere na ezinụlọ Meatlikov. Nke a na-agụnye rye, ọka, ọka bali, buckwheat, wdg. Nzube nke ịzụlite ihe ọkụkụ ndị dị otú ahụ bụ ọka. Nke a bụ isi ngwaahịa eji mee pasta, achịcha na ihe dị iche iche pastries.
Kedu ihe na-ewute ahụhụ na-emerụ ahụ na otu esi agba ya ọgụ?
Bug na-emerụ anụ na-adịghị edozi n'ụlọ ma ọ bụ ụlọ ndị obodo, ọ na-emebi ihe ọkụkụ n'ubi na n'ọba, ebe a ga-echekwa nke ikpeazụ. Na-eto eto ọka, ọ ga-ekwe omume ịhụ na àgwà ọma nke ọka gbanwere. Mmetụta dị iche iche nwere ike imeri ọdịbendị, ma ọ bụ karịsịa ahụhụ nke nwere ike ịkpata mmebi siri ike, nke a ga-atụle mgbe e mesịrị na isiokwu ahụ.
"Granstar" ọdọ mmiri: usoro na oge nke ngwa, oriri
Ogologo oge gara aga, e gosipụtara ọgwụ ndị dị ka ụzọ dị irè ma dị irè maka nchịkwa ahịhịa n'ime ogige ma ọ bụ ogige nri. Ọ bụ ezie na e nwere ndị ọzọ, ọ dịghị onye na-elekọta ubi nwere ike ime ma "ọgwụ" ndị a. "Granstar" bụ otu n'ime ụlọ ahịhịa ndị kachasị ewu ewu. Ngwá ọrụ nke na-arụ ọrụ ma na-akwadebe Ihe omume ya bụ ihe pụrụ iche - tribenuron-methyl n'ogologo 750 g / kg.
Helios "ahihia": usoro nhazi, ntụziaka
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-eche nsogbu nke ugboro ugboro nke ahịhịa. N'ọnọdụ dị otú a, ọ dị mkpa iji ngwa ngwa chọpụta ọgwụ ga-enyere ọgụ ọgụ. Anyị na-elebara anya na isiokwu ahụ, nke a ga-enye ntụziaka gbasara ngwa nke "Helios". Ngwongwo ihe siri ike, ntanye akwụkwọ, nkwakọ ngwaahịa Akụkụ bụ isi n'ime ihe mejupụtara nke ahịhịa osisi bụ glyphosate, nke sitere na ogige ndị sitere na mbara igwe.
Mogar Chumiza (bristle): lekọta osisi na uru bara uru nke ahịhịa ugbo
Bristles, Mogar Chumiza, ụmụ oke, setaria - aha ndị a nile na-ezo aka na otu osisi Setaria italica, nke a na-ahụ na mpaghara steppe na ọhịa-steppe zones. O nwere uru bara uru, eji eme ihe n'ubi, ihe odide odida obodo na ogwugwu omenala. Anyị na-amụtakwu banyere ihe ndị mejupụtara chemical, uru bara uru na ụzọ nke na-eto eto.
Njirimara bara uru nke oka maka ndi nwoke, ndi nwanyi na umuaka
Ọka, nke a na-akpọkwa ọka, bụ ihe dị oké ọnụ ahịa maka mmepụta nri na nri maka anụ ụlọ. A na-eji ya eme ihe na ụlọ ọrụ, ọgwụ na cosmetology. Banyere ihe ndị o mere, àgwà ndị bara uru, njirimara nke iji na nchekwa ma a ga-atụle ya.Ngwurugwu Chemical Kasị bụ osisi osisi herbaceous nke ruru mita anọ n'ịdị elu ma gbasaa n'ala site na mita mita na mita.
Ụdị ọka dị iche iche
Sweetcorn maara onye ọ bụla site na nwata. Mkpụrụ ọka ọlaedo nwere uto pụrụ iche, ọ dịghịkwa otu osisi nwere ike ọ dịkarịa ala na-emeghachi ihe ụtọ nke ọka cob. Taa, ihe ubi a na-abanye otu n'ime ebe kachasị ama n'etiti ihe ubi n'ubi n'ihi na o nweghi ihe di oke ohia na ihe ozo.
Esi esi mee ka mmiri zoo ala: ọnụego ngwa
Mmiri, okpomọkụ, ọkụ na ihe oriri dị mkpa maka mmepe kwesịrị ekwesị nke ọka a kụrụ n'ubi nakwa maka inweta ezi mkpụrụ. Ihe kachasị mkpa n'ime ihe ndị a mgbe oxygen, carbon na hydrogen bụ mineral - nitrogen (N), phosphorus (P) na potassium (K). Ọ bụ ezie na ha nọ n'ụdị ala ahụ, ego ha ezughị ezu, nke na-eduga na mkpa maka nri fatịlaịza.
Atụmatụ nke mmiri wit, cultivation, mkpụrụ
Okpomọkụ bụ otu n'ime nri ndị dị mkpa nke ụwa. Azụlitela ahịhịa a kemgbe oge ochie ma na-ekesa ugbu a n'ụwa niile. Ihe a na-atụle ihe ndị dị ndụ nke ọka wit, tinyere akụkụ ndị e ji mara ya. Nkọwa Nke a bụ nke ezinụlọ ọka na ụdị ọka Wheat.